Messi oo iska indho tiray Griezmann, xili sidoo kale uu ka hadlay aragtidiisa kaga aadan hadii uu kooxda ka tagayo Valverde – Gool FM
(Spain) 24 Maajo 2019. Kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa kasoo muuqday shir jaraa’id, kaddib musiibadii garoonka Anfield ee tartanka Champions League ay kala kulmeen Liverpool.
Dhinaca kale Lionel Messi ayaa wuxuu falanqeeyay kulanka habeen dambe ay kooxda Valencia kula ciyaari doonaan finalka Copa del Rey garoonka Real Betis ee Estadio Benito Villamarín.
Ugu horeyn Lionel Messi ayaa wuxuu ka hadlay eedeymaha loo jeedinayo tababare Ernesto Valverde wuxuuna yiri:
“Hadii aan runta ka hadlo, lama socdo wararka jira, ii sheeg waxa lagu dhaleeceeynayo Valverde, wuxuu qabtay shaqo aad u fiican, mas’uul kama ahan guuldaradii Liverpool”.
“Waa anaga oo kaliya cida ay tahay in lagu dhaleeceeyo wax walba ee ka dhacay kulankaas, xaqiiqadu waxay tahay in wixii dhacay ay ahayd nasiib daro, laakiin ciyaartoydeena ayaa mas’uul ka ah wax walba ee dhacay”.
“Waxaan doonayaa in Ernesto Valverde uu sii joogo kooxda, waxaan u ciyaareynaa inaan ku guuleysano labaley, marka laga soo tago kulamadii Roma iyo Liverpool, la shaqeynta Valverde waxaan soo qaadanay laba sano ee aad u fiican”.
Intaas kaddib Messi ayaa wuxuu ka hadlay ku guuleysigiisa kabta dahabka markale wuxuun yiri:
“Ma xiiseenayo arintaas, wali waxaan kasoo kabaneynaa wixii ka dhacay kulankii Liverpool, gaar ahaan aniga, waxaan isku dayi doonaa inaan guuleysano kulanka finalka Copa del Rey, islamarkaana aan si fiican kaga dhameysano sanadka”.
Ugu dambeyn Lionel Messi ayaa la weydiiyay su’aal ku aadan inuu xiiseenayo imaatinta Griezmann ee Barcelona xili ciyaareedka soo socda wuxuuna ku jawaab celiyay.
“Marna kama fikirin heshiisyada lala xiriirinayo kooxda”.
Manchester United oo kula dagaalameysa kooxda Barcelona heshiiska Griezmann